Beira Mar Novo Gqibezela ifulethi entlabathini - I-Airbnb
Beira Mar Novo Gqibezela ifulethi entlabathini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLuiz Carlos
ULuiz Carlos yi-Superhost
Praia Grande / Matinhos Belíssimo Apto "Pé na Areia", ejongene nolwandle, kunye ne-52 square metres, igumbi lokulala eliphindwe kabini, ibhedi ye-bunk, ibhedi yesofa. Igumbi lokuhlambela, indawo encinci yokuhlamba impahla, indawo yeofisi yasekhaya (uphawu lwe-wi-fi kuyo yonke indlu), igaraji yabucala, izitulo zaselwandle ezikhethekileyo zeflethi.
I-Apartment enefenitshala ecwangcisiweyo kunye neyakhelwe ngaphakathi yokuthuthuzela ngakumbi kunye nokusetyenziswa okungcono kwendawo. Ifenitshala, oomatrasi, intsha. Sinikezela ngemiqamelo kunye noomatrasi abanezigqubuthelo ezintsha (ezihlanjwa rhoqo). Ikhitshi elinazo zonke izinto eziyimfuneko ezisisiseko, isitovu se-coktop, i-microwave, ifriji yebar, umenzi wesandwich, iketile yombane, i-charcoal barbecue. Ilungele ukusetyenziswa kwam kunye noSapho lwam.
4.79 · Izimvo eziyi-58
I-Praia Grande Matinhos, enye yezona ndawo zibalaseleyo ze-spa eParaná. I-Apartment enendawo egqwesileyo (ejongene nolwandle), kufutshane nePortal da Praia Grande, ijikelezwe ziivenkile ezininzi ezibalulekileyo, ezinjengeemarike, iibhaka, iibhula, phakathi kwabanye.
Umbuki zindwendwe ngu- Luiz Carlos
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Matinhos